Tsy nahomby ny fitaovana fanamboarana Inbox
Home Products DataNumen Outlook Repair Nisy lesoka tsy nampoizina nanakana ny fidirana amin'ity rakitra ity. Ampiasao ScanDisk hijerena ireo kapila misy lesoka, ary avy eo andramo ampiasaina indray ilay fitaovana Fanamboarana Inbox.
Fitaovana fanamboarana Inbox dia tsy mahomby amin'ny fanamboarana ireo rakitra PST simba na simba
Rehefa mampiasa Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) ianao hanamboarana rakitra efa simba na simba an'ny folder personal folder (PST) dia tsy mahomby ilay fitaovana ary mitatitra ity hafatra diso manaraka ity:
Ny fitaovana fanamboarana Inbox dia tsy manaiky ny rakitra xxxx.pst. Tsy misy fampahalalana azo averina.
izay 'xxxx.pst' no anaran'ny fisie PST hosokafana.
Ny kolikoly na ny fahasimban'ny rakitra PST dia tena ratsy ka ny Inbox Repair Tool (Scanpst) dia tsy afaka manamboatra ilay rakitra.
Tokony hampiasa ianao DataNumen Outlook Repair manamboatra ny rakitra PST maloto. Miaraka amin'ny fandefasana fandaharana sy algorithmika be pitsiny, DataNumen Outlook Repair ho sitrana foana most ny tahirin-kevitra azo averina mamorona ilay rakitra PST maloto, noho izany io no fitaovana fanarenana Outlook tsara indrindra eny an-tsena.
File maloto: Test2.pst
File namboarin'i DataNumen Outlook Repair: Test2_fixed.pst